Kitra – «Euro 2021»: nampitomboina ho 26 ny isan’ireo mpilalao | NewsMada
Kitra – «Euro 2021»: nampitomboina ho 26 ny isan’ireo mpilalao
Noho ny fisian’ilay valanaretina Covid-19, nandray fanapahan-kevitra vaovao ny firaisamben’ny baolina kitra eoropeanina UEFA fa hampitomboina ho 26 ny isan’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa iray hifaninana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Euro 2021”, tanterahina ny 11 jona ka hatramin’ny 11 jolay ho avy izao.
Hisorohana ny mety ho tsy fahampian’ireo mpilalao izany, raha toa ka misy tratry ny aretina mialoha ny fihaonana. Na izany aza, manaraka ny lalàn’ny baolina kitra hatrany ny rehetra ka mijanona ho 23 ihany ireo soratana ao anaty taratasin-dalao.
Afaka soloina kosa ny mpiandry tsatoby mialoha ny lalao raha toa ka marary na tsy manana tanjaka vatana, hiatrehana ny fihaonana.
Mizarazara be ny hevitr’ireo mpanazatra mikasika ity fanapahan-kevitry ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny UEFA ity. Ho an’i Didier Deschamps, mpanazatra frantsay, mety aminy ilay fampitomboana isa ireo mpilalao, saingy tokony hosoratana ao anaty taratasin-dalao avokoa. I Gareth Southgate, mpanazatra anglisy, kosa mihevitra fa hahitana lenta avo kokoa ny famerana ny isa ho 23.